के विशेष छ आजको चन्द्र ग्रहण ? - Muldhar Post
के विशेष छ आजको चन्द्र ग्रहण ?
पत्रपत्रिकाखबर २०७८, ११ जेष्ठ मंगलवार 229 पटक हेरिएको
११ जेठ, काठमाडौं । मे २६ चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । यो पटकको चन्द्रग्रहण निकै महत्वपूर्ण र विशेष छ । किनकि यो चन्द्रग्रहणका क्रममा विश्वका विभिन्न भागबाट रातो चन्द्रमा देखिनेछ । रातो देखिने चन्द्रमालाई सुपर ब्लड मुन भनिन्छ ।
खगोलविद्ह‍रूका अनुसार हरेक अढाई वर्षमा एकपटक चन्द्र ग्रहणको बेला रातो चन्द्रमा देखिन्छ । सुपरमुन के हो ?-सुपर मुन यस्तो खगोलीय घटना हो जहाँ चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउँछ । सोही कारण चन्द्रमा अन्य समयमा भन्दा ठूलो आकारको र १४ प्रतिशत धेरै चम्किलो देखिन्छ । त्यसलाई पेरिगी मुन पनि भनिन्छ । चन्द्रमा वा कुनै पनि प्राकृतिक उपग्रहहरू पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आएको अवस्थालाई पेरिगी भनिन्छ भने सबैभन्दा टाढाको अवस्थालाई अपोगी भनिन्छ ।
ब्लडमुन-चन्द्र ग्रहणका क्रममा चन्द्रमा पृथ्वीको छायामा पर्दछ । यहीँ क्रममा क्रममा कुनैबेला चन्द्रमा पूर्ण रूपमा रातो पनि देखिन्छ । त्यसलाई ब्लड मुन भनिन्छ । नासाका अनुसार सूर्यका किरणहरु पृथ्वीको वातावरणमा छिरेसँगै केही मोडिन्छन् र फैलिन्छन् । निलो र बैजनी रंग रातो र सुन्तला रंगभन्दा धेरै फैलिन्छ । सोही कारण आकाशको रंग निलो देखिन्छ । रातो रंग सिधा दिशामा अगाडि बढ्छ, सोही कारण सूर्योदय र सूर्यास्तको बेलामा मात्रै आकाश रातो देखिन्छ । त्यसक्रममा सूर्यको किरण धर्तीको वातावरणको एक बाक्लो तह पार गरेर हाम्रो आँखासम्म पुग्दछ ।
ब्लु मुन-यो पटकको पूर्णिमा मे महिनाको दोश्रो पूर्णिमा हो । जब कुनैपनि महिनामा दुईवटा पूर्णिमा हुन्छन् तब दोश्रो पूर्णिमालाई ब्लु मुन भनिन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार सुपरमुन तथा चन्द्रग्रहण फरक फरक खगोलीय घटना हुन् जुन कुनैबेला सँगै घटित हुन्छन् । बीबीसीबाट ।